Ukuhamba ngenqwelomoya kunye ne-COVID-19 eSaudi Arabia: Njengoko kubonwe yi-CEO ye-flyadeal
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » Ukuhamba ngenqwelomoya kunye ne-COVID-19 eSaudi Arabia: Njengoko kubonwe yi-CEO ye-flyadeal
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • udliwano • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Februwari 19, 2021
I-Aviation kunye ne-COVID-19 eSaudia Arabia njengoko kubonwe yi-CEO ye-flyadeal
Ukuhamba ngenqwelomoya eSaudi Arabia ukuthatha uhambo, ilizwe kufuneka livumele iindwendwe ngakumbi kwaye landise ukhenketho ngelixa lijongana ne-coronavirus.
Ubukumkani baseSaudi Arabia baqala ukwamkela abakhenkethi bamanye amazwe ngoSeptemba 2019 ngokusungula inkqubo entsha ye-visa yamazwe angama-49.
I-Saudi Crown iNkosana uMohammad bin Salman amabhongo akhe kukushiya uqoqosho oluxhomekeke kwioyile kwaye enze ukhenketho lube yintsika ephambili.
Isebenza njani inqwelomoya ehamba ngenqwelomoya ukuhlangabezana nocelomngeni kwizithende ze-COVID-19.
URichard Maslen weCAPA Live uthethe noCon Korfiatis, u-CEO weSaudia Arabia moya ohamba ngenqwelomoya, inqwelomoya entsha eMiddle East eseJeddah, eyaqala ngonyaka ka-2017. Baxoxa ngotshintsho ekujoliseni ilizwe kukhenketho, ukuhlangabezana nemiceli mngeni ye-COVID- 19, kwaye inqwelo moya encinci inokunceda njani isizwe ukuba sifezekise iinjongo zayo zokuhamba ngenqwelomoya. Okulandelayo kukukhutshelwa kwengxoxo yabo.
Wamkelekile kolu dliwanondlebe lwamva nje lwenqwelomoya yenqwelomoya njengenxalenye yechungechunge lweCAPA Live. Namhlanje, ndiza kuthetha noCon Korfiatis, i-CEO ye I-flyadeal, inqwelomoya yenqwelomoya yase Saudi Arabia le yinxalenye yeQela laseSaudi. Con, wamkelekile kwiCAPA Live.
Molo, sisityebi. Unjani? Ndiyavuya ukukubona kwakhona.
Ndilungile. Enkosi. Ke, ngaphezulu kwemizuzu engama-30 elandelayo, siza kuncokola kancinci malunga nokuhamba ngenqwelomoya eSaudi Arabia. Ukuthetha ngombono we-Saudi Arabia ukuvula uqoqosho lwayo ngakumbi, ukuvumela abatyeleli abaninzi, kunye nokuhluka nje kude kwishishini leoyile kunye nezixhobo ebelinazo ngaphambili. Siza kuba nencoko encinci kunye neCon malunga ne-flyadeal, ukusekwa kwayo, indlela ekhule ngayo kunye nendlela i-COVID ezichaphazele ngayo izicwangciso zayo kunye nendlela ejonge ngayo kwikamva nje ukuba uzinzo lwamazwe aphesheya lubuye kwaye iinqwelomoya zinikwe amandla okukhula kwakhona. Ke iSaudi Arabia yayihlala ililizwe ekunzima ukufikelela kulo, ethintela kakhulu umgaqo-nkqubo wevisa. Kodwa Ezokhenketho ngoku ziyintsika ephambili yesicwangciso esiliqili sokulungiswa kweNkosana yaseSaudi uMohammad bin Salman ukumka kuqoqosho olwaluxhomekeke kwioyile.
Ubukumkani buvule iingcango zabo kubakhenkethi bamanye amazwe ngoSeptemba 2019 ngokusungula inkqubo entsha yevisa kumazwe angama-49. Kwaye ufuna ukuba eli candelo lifake igalelo kwi-10% yemveliso yawo iyonke ngowama-2030. La ngamanyathelo angqindilili avela kwimarike abantu abaninzi abaneembono ezininzi malunga nalo. Ke, Con, ukuqala nje, kungakulunga ukufumana umxholo omncinci kwindlela esebenza ngayo yonke le nto. Kwakungeentsuku zokuqala ngaphambi kokuba i-COVID ibethwe, kodwa kufanele ukuba kubekho imiqondiso yokuba uqala ukubona ukuba intengiso iyavula na.
Ngokuqinisekileyo. Intshayelelo elungileyo, isityebi. Jonga ixesha elimnandi lokuba lapha, kwaye ibiyinto enkulu kum ukuba ndize eSaudi Arabia kwaye ndijonge eli thuba lifanelekileyo kwaye ndilizise ebomini. Ndicinga ukuba, njengoko usitsho, ubukumkani ngaphambili bebusoloko buvaliwe, ngokuqinisekileyo buvaliwe kukhenketho, luvulekele ushishino kodwa ndicinga ukuba ngohlobo oluthile lwefashoni ethintelweyo okanye mhlawumbi amathuba oshishino ebengekho ngendlela efanayo. Uqoqosho olwalusekelwe ikakhulu kubutyebi nangona lusenjalo kwaye lusenendlela ende yokuphila phambi kwalo. Ijonge ixesha elide isithi, "Kulungile, kulungile, yintoni enye ekufuneka siyenzile ukuze siphile ixesha elide?" Kwaye ngenene eli lilizwe elingaphandle kokuba sisityebi kwimithombo yobutyebi, isityebi kwezinye izinto ezininzi.
Ineendawo ezinomtsalane kunye neendawo zokundwendwela. Inolwandle oluhle, ineentaba, inendawo zelizwe ezifumana ikhephu Yikholwe okanye hayi. Unesayithi le-dessert engakholekiyo kunye noyilo kunye nembali apho. Kwaye ngokwenene kukho amanye amashishini anokuxhaphaza nawo. Unabantu abaninzi. Sinabemi abaninzi basekhaya kwi-GCC. Ifundile kwaye ifanelekile kwaye ngokuqinisekileyo amanye amashishini anokuphila kwaye aphumelele apha. Ndicinga ukuba ezokuqala sizivayo ngaphandle ziziseko zophuhliso kunye nokunxibelelana nokhenketho, kwaye loo nto iyamangalisa kuba ngokucacileyo, kufuneka senze ukuba abantu bakwazi ukuza baphonononge benze ishishini apha, okanye iholide apha okanye beze apha ngeenjongo zonqulo okanye esinye isizathu ngaphandle kokuba ukhetha ukuza. Kwaye loo mathuba akhona ukuba axhatshazwe.
Ndiyaqikelela, ngaphambili COVID isizathu sokuba i-flyadeal ize malunga neqela lase-Saudi labona indawo emhlophe yenqwelomoya yexabiso eliphantsi ebukumkanini. Kwaye ndingathi lo mmandla, uMbindi Mpuma uyindlala encinci yohlobo lweemodeli zexabiso eliphantsi ozibonayo zixhaphakile kwaye zidale ukungena kwimarike ebalulekileyo kwiindawo ezinjengeYurophu neMelika kunye neMpuma yeAsia nakwindawo ezikuyo. okwangoku. Kwaye unamabhongo kakhulu, ungqwabalala, kwaye ngokuqinisekileyo ufuna iziseko zophuhliso kunye nezothutho ukugcina isantya kunye noko. Ngaphandle koko, abanakuze bahambise kuhlobo lwamanani abanqwenela ukuwafikelela ngo-2030.
Ke ngoku siyi-flyadeal sajika kathathu ngoSeptemba kulo nyaka uphelileyo, ngoku ke sisese-airline esincinci. Siphume kwiibhokisi emva kwexesha lika-17, ngoSuku lweSizwe xa siqala iinkonzo kwaye sakhula ngokukhawuleza saya kwi-11 entsha ye-Airbus 320ceo. Sime kancinci ukusukela ngoko, ngokuyinxenye ngenxa yotshintsho kuhlobo lomgaqo omxinwa womzimba kwi19, eye yacotha amandla ethu okuthatha iinqwelomoya ngokukhawuleza. Kwaye ngo '20, apho besinethemba lokukhula ngenkani ngokubhekisele ekukhuleni kweenqanawa kunye neendawo ezingakhange zibekho ngenxa yengxaki esiphila kuyo okwangoku. Kwaye asikaqiniseki ngenene ukuba siza kugqiba nini. Ke mhlawumbi ukuze ushwankathele apho simelwe kukuba ngaphezulu kweminyaka emithathu.
Ke namhlanje njengoko simi ngenqwelomoya ezili-12, sithathe i-NEO yethu yokuqala kulo nyaka uphelileyo, besizakufikelela kwizigidi ezili-10 zokuhamba ngenani labantu esibahambileyo. Sisengumsebenzi wasekhaya, kodwa sinazo uyilo lokuba ngamazwe ngamanye amaxesha kulo nyaka. Ke ngoku sasekhaya kwaye sibe kweli xesha libekiweyo inqwelomoya yenqwelomoya yesibini ngobukhulu apha ekhaya, ethe kanye ngeli xesha sihleli kulo iyinto emangalisayo kakhulu. Kwaye ubungqina kwintengiso buyilungele ngokwenene imveliso yexabiso eliphantsi kunye noluntu oluthatha kuyo.
Inomdla ngokwenene uCon. Ngokucacileyo, uthethile malunga nokukhula okukhulu kwaye ujongeke ngokuqinisekileyo, ngokucacileyo ukuqala kuka-2020 kwabetha wonke umntu ngokothuka okukhulu, akukho mntu wayelindele into eyenzekileyo. Ikuchaphazele njani oku? Isebenze njani iSaudi Arabia ukulawula ukusasazeka kwe-COVID?
Akukhange kubekho ncwadi idlalwayo ngenxa yoko besiphila kuko ngo-2020, kwaye ihlabathi kuye kwafuneka lisungule izinto ezintsha lize liziqhelanise nalo kwaye likhawuleze ukwenzeka xa kuthathelwa ingqalelo ingozi ojamelene nayo malunga nendlela o… Ewe, ndiyaqikelela njengobuntu, kodwa nanjengokuba iJografi kunye neshishini ngokunjalo, besingabikho ngaphezulu okanye ngaphantsi kokuzikhusela kunayo nayiphi na enye indawo. Singene kwindawo evaliweyo epheleleyo ngasekupheleni kuka-Matshi. Yaqala ukuba itshixiwe kwilizwe jikelele. Yiloo nto ndicinga malunga neveki yesithathu ka-Matshi kwaye kungaphelanga iveki emva koko sazivalela ekhaya. Ke, zonke iinqwelomoya ezingena ziphuma ebukumkanini kwaye ngaphakathi ebukumkanini kwaye zonke izithuthi zikawonkewonke ziye zayeka ukusebenza ngobusuku obunye, kwaye oko kwahlala malunga neenyanga ezimbini ezinesiqingatha ekhaya ngomhla we-31 kaMeyi savunyelwa ukuba sibuye ekhaya. Kodwa ngaphambi kokuba ndifike kwelo xesha, ndicinga ukuba kwelo xesha lokutshixa, lalinzima kakhulu.
Kwaye sasinexesha lokubuya abantu abakwazanga ukuhamba ngaphezulu kweekhilomitha ezimbini ukusuka kumakhaya kunye namanyathelo amaninzi owabonileyo kwiindawo ezininzi zehlabathi. Ubukumkani buhambe ngokukhawuleza nangokukhawuleza kwaye ngokuqinisekileyo ngendlela efanelekileyo ngokwamanqanaba amkelweyo. Kwaye ngenene, ndicinga ukuba iziphumo ezimangalisayo kunye neenkcukacha eziphantsi ze-COVID esinazo apha ukusukela kunyaka ophelileyo zingqina ukuba loo manyathelo afanelekile njengoko enokuba ebekhathazekile kwindawo yokujonga kunye namanye amanqaku apho abantu Ngaba ngabahambi abakhutheleyo apha, umzekelo, kwaye batshixelwe ngokupheleleyo kwinto yangaphandle apha ekuhlaleni, ke kuye kwafuneka sidlule kwelo xesha. Ngokuzimeleyo, iinqwelomoya zaphinda zavuselelwa ekupheleni kuka-Meyi. Sinamanyathelo e-COVID, sisenza ebhodini. Kwimeko yethu njengomqhubi womzimba omncinci asivumelekanga ukuba sithengise isihlalo esiphakathi kwaye kwiinqwelo-moya ezibanzi abanakuthengisa isihlalo ecaleni kwesihlalo esithengisiweyo.
Kwaye ke, bekukho izithintelo ebhodini. Ngokucacileyo kukho amanyathelo ajikeleze izikhululo zeenqwelo moya ngokwazo kunye nendlela ongena uphuma ngayo kwiindawo ezahlukeneyo zokukhangela kunye nezinto ezinje, kwaye izikhululo zeenqwelomoya zazinyanzelekile. Sasivunyelwe kuphela ukuba sibuyele kwi-20% yamaza okwisiqalo ekuqaleni kwaye oko kuhamba ngokuthe chu. Ke, ibilulwazelelo olucothayo, kodwa ngokumangalisayo, into esiyifumeneyo ngumnqweno onamandla wokuhamba ekhaya. Ishishini labuya, ukugcwala kwezenkolo kwakusadakumbe ngenxa yokuba ezona ndawo zonqulo ziphambili kweli lizwe sihlala kuzo zazisavaliwe. So earlier it was business, there was a bit of [inaudible 00:08:42] ebuya kwaye umdla uphuhliso lweshishini lokhenketho lwasekhaya abantu ababengakwazi ukuhamba kumazwe aphesheya. Kwaye ngokukhawuleza phambili malunga nonyaka ngoku sibuyele ubuncinci kwityala le-flyadeal malunga ne-90% yamaza esasenza ngaphambili.
Kwaye ukusukela ngala mhla wokuqala, eneneni, malunga nolo lwakhiwo iindiza zethu bezizele. Izihlalo zavunyelwa ukuba zithengise siyazizalisa, kwaye ayisiyiyo yamava ethu kuphela, kodwa lelinye lamava eenqwelo moya zasekuhlaleni. Ibiyimarike yasekhaya eyomeleleyo kakhulu. Kwaye kwimeko yethu, sisikelelekile kuba besingumqhubi wasekhaya ngaphambi kokutshixa. Khange siqale uhambo lwamazwe aphesheya kwaye asinanxalenye ibalulekileyo yeenqanawa zethu ezazinikezelwe kwilizwe liphela. Ke, senze kakuhle kakhulu kwimeko enzima kakhulu ukuya kuthi ga apho i-flyadeal igcine abasebenzi bayo ngokupheleleyo ngexesha lobunzima, sigcina wonke umntu eqeshiwe kwaye sigcina wonke umntu exakekile. Kwaye sinethamsanqa lokuba sibe semarikeni kwaye sisebenza ngobungakanani esikwaziyo ukukufezekisa, ngenxa yoko sonwabile. Sijonge ngethemba kwabanye abafana abaqaqambileyo ngaphambili kulo nyaka, kodwa kusekutsha ukuxela.